Efa Hita amin’ny Teny Sinoa ny Torolàlana amin’ny Fitorahana Blaogy Miafina Anarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2018 19:55 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2008)
Noho ny fanampian'ny olona iray tena tsara fanahy izay indrisy fa tsy te hotononina anarana, efa hita amin'ny teny Sinoa (rohy maty) ankehitriny ny torolàlana nataon'ny mpiara-namorona ny Global Voices, Ethan Zuckerman, momba ny Anonymous Blogging With WordPress and Tor (Fanoratana Bilaogy Miafina Anarana miaraka amin'ny WordPress sy Tor) (rohy maty), mitondra traikefa an-taonany maro amin'ny fanakambanana ny teknôlôjia sy ny fikatrohana, tsy amin'ny toerana iray hafa amin'izao tontolo izao irery ihany, fa anatinà fonosana mora entina milanja 5Mo latsaka izay natao manokana mba ho zaraina.
Ho tonga amin'ny faran'ity volana ity ny dikatenin'ny Blog for a Cause!, ahitàna ny Torolàlana Global Voices ho an'ny Blog Advocacy, dingana tsara ho an'ireo efa ho—sy ho an'ireo efa— manana ireo fototra ilaina mba hiarovan-tena amin'ny fanaovana asa sasany ao anaty aterineto. Toy ny ho an'ny Anonymous Blogging, mety hilaina amin'ny fijerena azy ny Adobe Acrobat Reader ary afaka alaina maimaimpoana eto izany.
Ary miverina amin'i Ethan ho an'ny teny farany:
Raha tena tsy mila manafina anarana ianao, aza manafina. Raha toa ka miaraka amin'ny teninao ny anaranao, azo antoka kokoa fa handray ny teninao ho matotra ny olona. Saingy misy ireo olona tsy maintsy hanafina ny anarany, ary izany no antom-pisian'ity torolàlana ity. Ka mba aza mampiasa ireo paikady ireo re raha tsy tena ilainao izany.
Aza misalasala re manampy amin'ny fanamboarana ity tetikasa ity amin'ny fandikàna na ny Blog for a Cause! na ny Anonymous Blogging amin'ny teninao.
Raha mila fanazavana fanampiny, resaho amin'ity adiresy manaraka ity aho: chinese [ at ] globalvoicesonline[ dot ] org, na ny Mpandrindra ny Global Voices Advocacy, Sami Ben Gharbia ao amin'ny: advocacy [ at ] globalvoicesonline [ dot ] org.